IZINTO EZIPHAMBILI KWIGUMBI LOKUHLAMBELA - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Izinto eziPhambili kwiGumbi lokuhlambela
Izinto eziPhambili kwiGumbi lokuhlambela
Apha sabelana ngemathiriyeli efanelekileyo kumgangatho wegumbi lokuhlambela kubandakanya i-pros and cons, imifanekiso kunye nemibono yoyilo.
Amagumbi okuhlambela aya kuba lelinye lamagumbi asetyenzisiweyo ekhaya kwaye imigangatho ekhethiweyo iya kudlala indima enkulu kubuhle bendawo kunye nomsebenzi wendawo. Ngelixa kukho inani elifanelekileyo lezinto ezinokusetyenziswa, oko akuthethi ukuba zonke ziyacetyiswa.
Apha ngezantsi kuyakuba noluhlu lwezinto ekufuneka ucinge ngazo xa uxoxa ngomgangatho oza kuwusebenzisa, ulandelwe ziindidi ezahlukeneyo ezaphukileyo kunye neenzuzo zabo. Kufuphi nesiphelo sokukhumbula ngokulula iya kuba ziindleko zezinye iindlela ezingcono. Ukuzingela kokonwaba!
Umgangatho oGqibeleleyo woLungiso lweGumbi lokuhlambela
Iithayile eziGqibeleleyo zoMgangatho weBhafu
IVinyl eyiGumbi lokuhlambela eliGqibeleleyo
Eyona ndawo ingcono yokutyibilika kwigumbi lokuhlambela
Umgangatho wokuthintela kumagumbi okuhlambela
Imigangatho ezinzileyo yamagumbi okuhlambela
Iindleko zaphansi zangasese
Ngokubanzi umgangatho olungileyo wokuhlambela uya kusekelwa kwiimfuno zakho zeprojekthi. Jonga inani lemali ofuna ukulisebenzisa, ixesha ekufuneka ulibeke kwiprojekthi, ufuna ukuba lihlale ixesha elingakanani, kwaye ukuba ngaba kukho naziphi na izinto ezizinzileyo ofuna ukuzibandakanya.
Ezinye izinto ezibalulekileyo ekufuneka uzibuzile kukuba uza kuwenza ngokwakho lo msebenzi, okanye ngaba ufaka i-installers endaweni yomgangatho? Eyona nto ibaluleke kakhulu, ufuna ukuba ibonakale njani? Ngokusekwe kwiimpendulo zale mibuzo, ezinye zeempawu zezinto ezimbalwa zingezantsi kwaye ziya kunceda uthathe isigqibo ngeyona ndawo yokuhlambela ilungileyo kuwe.
Ukuya kufikelela kumgangatho owaziwayo kwindawo yokulungisa indawo yokuhlambela, eyona nto iphambili yitayile yodongwe. Iithayile zeCeramic azinamanzi, zihlala ixesha elide, ziyanyangeka kumabala kwaye ziyafikeleleka, zisenza ukhetho oluhle kubanini bamakhaya abaninzi.
Lilonke kukho izinto ezininzi onokukhetha kuzo Iithayile zomgangatho wegumbi lokuhlambela kwaye akukho zimpendulo zichanekileyo okanye zichanekileyo. Kala iingenelo neengozi ezidweliswe apha ngezantsi kwaye ngaphambi kokuba uyazi uya kuba nomgangatho omtsha kraca phantsi kweenzwane zakho!
Iithayile eziGqibeleleyo zoGumbi lokuhlambela
Iithayile zeCeramic -Iithayile zeCeramic, njengoko zonke ezinye izinto zokwenza umgangatho zinobubi kunye nobubi bazo. Iithayile zeCeramic ziyafumaneka kuluhlu olukhulu lwemibala, iimilo kunye nobukhulu. Olu luhlu lubavumela ukuba bangene nakweyiphi na ekhoyo okanye entsha, umbala okanye ipateni yesikimu onokucinga ngayo.
Kuxhomekeka kubungakanani kunye nendawo okuyo igumbi lokuhlambela, unokubuthathela ingqalelo ubunzima bezi tile. Rhoqo iithayile zisetyenziswa kwigumbi lokuhlambela elincinane kumgangatho wokuqala kuthelekiswa negumbi lokuhlambela elikhulu eliyinqanaba eliphezulu. Ukuba ubunzima ngumba onokuthi uthathele ingqalelo ukomeleza i-subfloor ngokusebenzisa umaleko wesamente backerboard kunye nokubeka iithayile ngaphezulu kwayo.
Iithayile zePorcelain -Ukunkqonkqoza ixabiso phezulu njengenotshi kuya kukuzisa kudidi lweethayile ye-porcelain. Ezi tile ziya kufana neetiles zeceramic ezixoxa ngasentla kodwa ziya kuba nobunzima obungcono kwaye ziya kuba zizinto ezincinci. Oku kuyakuba kukufaka ngokungqongqo, ukongeza iidola ezimbalwa ezongezelelweyo kwimirhumo yokufaka eya kufuneka.
Ngaphandle kweethayile ezimbini ezikhankanyiweyo, iithayile ze-porcelain sesona sicelo sibhetele kwindawo yokuhlambela ngenxa yokunqongophala kweempawu ezinobungozi. Zombini ezi zinto ziya kugcinwa ngokulula kunye nokuhlala ixesha elide. Lo mgangatho uya kubanda kancinci ekuphathweni, okunokuba kuhle okanye kubi ngokuxhomekeke kwimozulu! Jonga ixabiso elingezantsi, kodwa zombini ziyafana xa kuthelekiswa naleyo yevinyl kunye necork edwelisiweyo.
Uxwebhu -Iphepha le-vinyl liya kuba lelona linokukhetha xa kufikwa kumgangatho we-vinyl kwigumbi lokuhlambela. Xa ukuchitheka kwamanzi kunamathuba aphezulu kungcono ukushiya iiseams ezimbalwa kangangoko. Ukuxhoma okugqithisileyo kwiphepha le-vinyl kukuba kunokwenzeka ukuba unaso nasiphi na isitayile kunye nombala. Kungenxa yokuba ithandwa kakhulu kangangokuba banokufumana uyilo oluncinci kuyilo lwabo.
I-vinyl yamaphepha ngokukodwa ilungile kakhulu kuba njengoko kukhankanyiwe iya kuba nokuncinci, ukuba ikho, ukuthungwa kwaye yeyona ndawo inokubakho apho ukutyibilika kungaphumeleli okanye kufakelwe ngokungachanekanga. Nangona ayisiyiyo projekthi yokuzenzela ngokwakho iya kuhlala ixabisa imali eyongezelelweyo oyibhatalayo ukuze ifakwe.
IVinyl eNtofontofo -I-Luxury Vinyl inokuza nokuba ngamaplanga okanye iithayile. Lo mgangatho unokumelana namanzi okanye ungangeni manzi, kwaye amaxabiso abo aya kubonisa olo khetho. IVinyl yokunethezeka ithambekele ekujongeni njengeemveliso eziphezulu, yiyo loo nto igama le-vinyl 'yokunethezeka'. IVinyl yinto ekulula ukuyibeka emilenzeni nasezinyaweni ngokungafaniyo neemveliso ezinzima ezinjengomthi oqinileyo.
Le nto ikwanamandla okufakelwa ngaphezulu komgangatho okhoyo, onokonga kwiindleko zokudiliza. Nangona konke oko kuvakala kulungile kwaye kuyinto entle kwaye kufanelekile ukugcina engqondweni ukuba le mveliso ayilongezeli naliphi na ixabiso ekhayeni, kwaye ukuba ayifakwanga ngokuchanekileyo inokubonakala inexabiso eliphantsi. Kodwa njengephepha le-vinyl iyafumaneka kuluhlu olubanzi lweendlela kunye nemibala. Rhoqo iiplanga zenziwe ukuba zifane neenkuni kunye neethayile njengelitye, zombini amaxabiso axabisekileyo kwezinye iindlela zokwenza isivumelwano.
Zombini ezi mveliso ziya kuba lixabiso elifanelekileyo kwaye zinokuthelekiswa nekhokho kunye neethayile ezidwelisiweyo. Amaxabiso athelekiswa ekupheleni. Oku kuhlala kukhethwa endaweni yomthi onzima kunye nelitye lendalo ngenxa yamaxabiso abo aphezulu kunye nokusilela kokumelana namanzi.
Umgangatho ophezulu kunye nexabiso eliphantsi lokuhlambela yivinyl. Ngelixa oku kungadibanisi naliphi na ixabiso ekhayeni, ayizukubiza ngengalo nomlenze (mhlawumbi iminwe nje embalwa). Xa sicinga ngomgangatho wexabiso eliphantsi esinokuwufumana, ungacinga ukuba uya kuphulukana nobuhle okanye umgangatho, kodwa akunjalo ngevinyl.
Njengoko kukhankanyiwe ngaphambili i-vinyl iyakubamba kakuhle kakhulu xa isiza emanzini aya kubakho kwigumbi lokuhlambela. Ukongeza, unokufumana i-vinyl ukuba ijongeke nangona uyifunayo, kungoko kungekho mfuneko yokuncama amathemba obuhle kunye namaphupha xa uhlahlo-lwabiwo mali luhlala lusezantsi.
Xa uthetha ixabiso nje nangona kulungile ukukhankanya ukuba zombini ikhokho kunye neethayile ezikhankanyiweyo zikhuphisana nzima kakhulu xa kuziwa kumaxabiso ezinto ezifanelekileyo kumgangatho wokuhlambela, jonga apha ngezantsi ukonakala kweendleko ze-vinyl kunye nezinto ezifanayo.
Umthi okhuni -Umgangatho wokhuni oluqinileyo luhlobo oluhle lomgangatho, kodwa ihlala ingacetyiswanga kwigumbi lokuhlambela. Ubuninzi bemigangatho yomthi onzima abunako ukukhuselwa kokufuma okuninzi ngaphandle kwengubo encinci ebhityileyo. Amagumbi okuhlambela ajongana namanzi amancinci, kwaye nokungena kancinci kwiplanga lomthi onzima kunokubangela ukubola.
Ukuthintela oku ngokusemandleni akho kuya kufuneka uqiniseke ukuba iiplanga zifakelwe kungekho zikhewu zokungena kwamanzi, kwaye ugqibezele ukutyibilika kwisiza. Kubalulekile ukufaka i-polyurethane sealant ukunceda ukukhusela i-flooring. Ezi zinto ziya kufuna iingcali kwaye zihlasele inani xa kufika ixesha lokuhlawula.
Ukuba uthatha isigqibo sokuhamba ngomthi kwindawo yangasese ukhetha nokwadala uqalo inokuba lukhetho olungcono kunezinye iintlobo zeenkuni. Ngelixa i-bamboo yendalo ayibobungqina bamanzi ngokupheleleyo ukuba iyamelana namanzi kunezinye iintlobo zomthi. Nangona kunjalo, yazi ukuba amanzi agqithisileyo aya kubangela ukuba ukhuni lubandakanye i-bamboo kwi-warp kunye nokubumba.
Indlela entle yokujonga iinkuni ngaphandle kokulungiswa kweengozi kukufaka ukhuni lujonge i-porcelain tile. Umthi ujonga i-porcelain tile inokukunika ukuzinza kunye nobuhle obufunayo kumthi wenene. Ngaphandle koko, i-vinyl flooring inikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokhuni ukutshatisa phantse naluphi na uhlobo lomthi.
Ikhaphethi -Ngoku ke, izinto ezibonakalayo zomgangatho oqinisekileyo wokuthintela kwigumbi lokuhlambela yikhaphethi. Ngelixa oku kubonakala ngathi hayi enkulu akukho bantu basebenzisa ikhaphethi kwiindawo zabo zokuhlambela. Ngapha koko, igumbi lokuhlambela labazali bam likhaphethi, kwaye ngoku ndicinga ngaloo nto, NGOKUQHELEKILEYO ngokungaqhelekanga. Ukuqiqa ngasemva koku kwezindlu zangasese kumgangatho kuhlala kumanzi amahle, okanye kuchitheke amanzi amaninzi.
Ikhaphethi iya kugcina ukufuma okwethutyana, nto leyo eya kuthi ingathandeki ukuba inyathele kuphela kodwa kunye nezizathu zesikhunta nesikhunta. Ukuba unqwenela ukuba nekhaphethi kuyacetyiswa ukuba usebenzise izinto ezingaphiliyo kwaye uqiniseke ukuba imfumba iphantsi ukuvumela ezona zicocekileyo kulula ukuzomisa.
Ikhorki lukhetho oluhle kakhulu lomgangatho ukuba ujonga kwindawo yozinzo. Ayisiyiyo kuphela Umgangatho we-eco-friendly , kodwa ikwangumbumba onganyangekiyo ngenxa yokungunda, nto leyo eya kuba yinto ebalulekileyo kwigumbi lokuhlambela. Le mveliso ilula kakhulu xa kufikwa kufakelo kwaye ikwicala elithambileyo lokuma nokuhamba. Ngelishwa ukutyibilika kwecork akuthinteli manzi, nangona kuyanyanzeleka ukuba kuncede amanzi.
izihlalo zefestile bay
Ibhonasi eyongeziweyo yekhokho kwindlu yangasese kukuba iya kushushu xa ungena, ehlala imnandi xa uphuma okanye ungena ishawa . Enye into embi ngalo kukuba kuya kufuneka igutyungelwe nge-polyurethane kungenjalo inokuba semngciphekweni wokonakaliswa ngamanzi okanye ukuqhekeka. Oko akubonakali ngathi kuxabisa ixabiso le-eco-friendly, iinyawo ezinobungane, ukutyibilika kum.
Njengokuba kukhankanyiwe ngaphambili i-bamboo flooring ikwangumthombo wolondolozo njengoko ikwahlelwa njengomthombo onokuhlaziywa ngokukhawuleza. Uqalo oluluhlobo lwengca olukhula ngokukhawuleza kakhulu kunezinye iintlobo zeenkuni.
Into enkulu ngayo nayiphi na iprojekthi yokulungisa indawo yokuhlambela iya kuba yindleko ke nantsi into encinci yokonakaliswa komgangatho oxoxwe ngawo.
Iithayile Iithayile zeCeramic okanye ze-porcelain ziya kukuqhubela naphi na ukusuka kwi- $ 1- $ 8 ngonyawo wesikwere, kuxhomekeke kumgangatho. Yongeza kwi- $ 4- $ 8 yokufaka kwaye uza kufumana i-avareji ye- $ 5.50 DIY, kunye ne- $ 11.50 efakwe ngobungcali.
IVinyl : I-Luxury Vinyl Flooring iya kukuqhubela naphi na ukusuka kwi- $ 2- $ 5 ngonyawo wesikwere, kuxhomekeke kumgangatho. Yongeza kwi $ 1.50 yokufaka kwaye uza kufumana i-avareji ye- $ 6 DIY, kunye ne- $ 7 efakwe ngobungcali.
Ikhokho : I-Cork Flooring iya kukuqhuba naphi na ukusuka kwi- $ 3- $ 8 ngonyawo wesikwere, kuxhomekeke kumgangatho. Yongeza kwi- $ 1 yokufaka kwaye uza kufumana i-avareji ye- $ 6 DIY, kunye ne- $ 7 efakwe ngobungcali.
Ukukunceda ukuba ube nomfanekiso-ngqondweni woyilo lwakho kukho izinto ezahlukeneyo Isoftware yokulungisa indawo yangasese iinkqubo ezikhoyo. Ezi zinokukunceda wenze indawo yakho yokuhlambela kwaye ungenise ukhetho olwahlukileyo kunye nokugqiba ukukunceda ukuba uzive kwindawo yakho.
uyilo imiqadi yeenkuni
into entsha ebolekwe neblue
indlela yokuthunga ilokhwe yomtshato